Hoogganoonni Koree Furmaata Barbaachaa Musliimotaa Hagi Tokko Kanneen Hiikaman Keessa Jiran
Fulbaana 12, 2016
Hoogganoonni Koree Furmaata Barbaachaa Musliimotaa Hagi Tokko Kanneen Hiikaman Keessa Jiran (Suuraa Faayilii)
Mootummaan Itiyoophiyaa jala-bultii waggaa haaraatti hidhamtoota 720 gad-lakkise keessaa, kanneen ammaan dura shororkeessummaan shakkamanii hidhamanii turan – miseensonni koree furmaata barabaachaa Musliimotaa jiraachuun beekamee jira.
Kanneen Qaalittii, Ziwaay, Dirre-dawaa fi Shawaa-roobititti argaman Manneen-sirreessaa Federaalaa, akkasumas – kanneen bakka-bu’ummaan hojjetan – manneen sirreessaa Naannoo Kibbaa, Tigiraayii fi Harar jiran irraa akka dhiifamni godhamuuf kanneen Boordii Dhiifamaatti dhihaatan – hidhamtoota 755 keessaa 720mni ulaagaa barbaachisu guutuuun kan hiikaman ta’uu isaanii ti, Mootummaan ka beeksise.
Hoogganoota Koree formaata barbaachaa Musliimota Itiyoophiyaa keessaa namoonni sadii – hidhaa waggoota afurii tii booda gad-lakkisaman.
Miseensonni koree sanaa hafan akka hiikaman kanneen gaafatan – deggertoonni isaanii amma illee akka hidhamanii jiran – dubbatu.
Kanumaan wal-qabatee “Yemusliim Guddaayooch – jechuun, Dhimmoota Musliimaa” gaazzexaa jedhamuuf qopheessaa ol’aanaa ka ture – gaazzexeessaa Yooseef Getaachew, hidhaa waggoota afurii tii booda gad-lakkisamuu isaatti ka gammade ta’uu --- gareen mirga gaazzexeessotaaf galmu – CPJn beeksisee jira. “Yooseef, duraanuu hidhamuun irra hin turre” jedha – gareen kun.
Kanneen otuu “hojii ogummaa isaanii hojjetanii hidhan” ittiin jedhu – gaazzexeessota hafan kaan illee Mootummaan Itiyoophiyaa akka hiiku gaafatee jira – CPJN.
Maatiileen Hoogganoota KFO Namoota Isaanii Manneen-hidhaa Jiran Argan. Garuu, Haalli Wal-argaa Jijjiirame, Jedhu
Dhaabbileen mirga namaatiif falman 15 Itoophiyaa keessatti nama hidhuu fi ijjeessuu akka dhaabatu Tokkummaa Mootummootaatti iyyatan
Abukaatoo: Hidhamtoota Keessaa Lubbuun Jiru Jedhamee Kan Maqaan Hin Dhahamiin Hedduu Dha Jedhu Maatiin
"Warshaa Harreen Keessatti Qalamee Gara Biyya Alaatti Ergamu Jiraachuu Mormine"
Bittaa, Gurgurtaa fi Tajaajilawwan Biroo Dhaabuun Mormiin Oromiyaa Keessatti Geggeeffamu Guyyaa Afuraffaaf Itti Fufe Jedhama
Komishinii Mirga Ummata,Hawaasa Afrikaa akka rakkoon hiriira mormii Itoophiyaa irratti dhalatte qoratamtu gaafate